Fitaovana Asongadina: Ny “Mobile In A Box” · Global Voices teny Malagasy
Fitaovana Asongadina: Ny “Mobile In A Box”
Voadika ny 28 Mey 2012 9:56 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Filipino, Português, Español, English
Miaraka amin'ny fielezan'ny finday any amin'ireo vondrom-piarahamonina voahilikilika sy zara raha voasolo tena, ilain'ireo olom-pirenena mpanao gazety sy mafana fo ny mianatra ny fampiasàna sy ireo tetikady mikasika ity teknolojia mihanaka be erak'izao tontolo izao ity. Koa satria miha-mitombo ireo tolotra fampiasa amin'ny finday, mety ilaina be mihitsy ny fianarana mikasika ny teknolojian'ny finday. Ary misy ireo rakitranà torolàlana mahasoa hita ao amin'ny aterineto hatramin'ny 2008 ho an'ireo mafana fo.
Ny Mobiles in-a-box izay an'ny Tactical Technology Collective, dia tahirinà fitaovana sy torolàlana narafitra hanampy ireo fikambanana mpisolovava sy mafana fo hampiàsa ny teknolojian'ny finday anatin'ny asany. Noforonina izany rehefa nodinihana tamin'ny antsipirihany niaraka tamin'ireo mpahay teknolojia mikasika ny finday mihoatra ny 50 sy mpisolovava mpiaro ny zon'olombelona nandritra ny 2007-08.
Natao indrindra ity kitapom-pitaovana ity mba hanaingoana sy hanomezana aina vao ny fampiasàna ny finday hisoloana vava sy hanentanana. Amin'ny fampiasàna rindrambaiko malalaka sy manana loharano mivelatra izy ity dia afaka manome endrika sy mametraka ireo tetikasany sy paikadiny manokana mikasika ny fisoloana vava amin'ny alalan'ny finday ireo mpampiasa azy .
Ny Mobiles in-a-box dia ahitàna:
tolotra paikady atolotra amin'ny fampiasàna ny finday hanohanana ny fisoloana vava
Fitaovana sy tolotra
Torolàlana entinao manomboka ny fisoloana vava amin'ny alalan'ny finday
Iray amin'ireo tetikasa lavorarin'ny Tactical Tech io tetikasa io. Navoaka tamin'ny Novambra 2008 ny Mobiles in-a-box (amin'ny teny Frantsay sy Anglisy) ary 4.000 ireo dikan'io rakitranà torolàlana io no nalefa manerana izao tontolo izao. Nanofana mivantana mpisolovava 1.500 ny Tactical Tech ary nahazo fitsidihana an-tapitrisany tao amin'ny vohikalany.
Tsy navaozina intsony ny Mobiles in-a-box hatreto nefa navoaka miaraka aminà Creative Commons izay mamela ny olona handika teny, hampifanaraka sy hanitatra ireo votoaty hita ao aminy. Mila adika aminà teny maro ireo fitaovana ireo mba hanomezana tombony anà vondrom-piarahamonina hafa. Afaka misintona ireo fitaovana ireo amin'ny dikateny Anglisy eto ianao.